Ipad, izicelo zam 43 ezizithandayo - i-Geofumed
IPad, 43 izicelo endizithandayo
NgoDisemba, 2010 Apple - Mac, Internet kunye neBlogs
Ukudlala, ukudlala ngeli phebhulethi ndizimisele ukuyeka ukusebenzisa i-laptop kwinqanaba lomnyaka ozayo. Ukungaqiniseki kwam ukuba ngaba kuya kwenzeka ukuba oku kubangele ukuba ndikhangele izixhobo ezisisiseko ezithatha indawo endenzayo -kwaye ndiyeka ukwenza- kwimeko yam.
Kuyathakazelisa umzekelo wokusebenza kwe-Apple ezi macwecwe, kuba izicelo zilandwa okanye zithengwa, kwaye unokwazi ukuba kukho izibuyekezo. Ukuvumelanisa kucocekile, inkqubo iyakubona ukuba kukho izicelo ezingazange zidluliselwe kwithebhulethi kwaye ngaphambi kokuhlaziywa utshintsho olutsha lwenza isipele kuphela.
Ukuthenga kuyasebenza, kufuneka ubhalise kwi-AppleStore, kufuneka ufune i-igama elingundoqo okanye umxholo kwaye kufuneka uhambe uze uwamkele imali. Xa uthengiwe, ufuna ukuyikhuphela kwenye ikhompyutha, qaphela ukuba sele sele ihlawulwe kwaye ikhadi lekhredithi alihlawulwa kwakhona.
Apha ndishiya iyona nto ibhetele endiyifunayo:
Seleko, ukufikelela kunye nokuphathwa.
Khangela i-iPad yam
Ikuvumela ukuba ubone kwiGoogle Maps, apho i-ipad yakho ikhona, ukuba uyayikhohlwa okanye ibelwe. Ungakwazi ukuyibuyisela kwakhona, uyilandele okanye uthumele umyalezo. Mahala
Ukugcina ulwazi kwifu. Isebenza njengengxowankulu ekhompyutheni ye-intanethi, ingcono kunokuba igcinwe kwi-imeyile ye-Gmail njengoko ivumelanisa nayo nayiphi na ideskithophu. Mahala
Ukuxhuma kwiikhomputha ngaphakathi kwe-LAN, ukuvumelanisa idatha, uthathe ulawulo lwe-PC ... nezinye izinto ezininzi. $24.99
Eyona nto ihamba phambili endiyifundileyo, isebenza kwi-Ipad kodwa ine-disadvantage edlalwa kwelinye ipaneli evulekileyo ihlala inika imiyalelo yi-Skype ... iimeko ezingonakalisi zenguqu yangoku quasi ezininzi Mahala
I-LastPass iTeb Browser
Kuhle kakhulu ukuphatha ipaswedi yamaphepha asetyenziswa rhoqo. Usetyenziso kuba iPad ayixhasi iiseshoni zomsebenzisi. Mahala
I disk ye-USB ye-Ipad
Oku kukuvumela ukuba ulawule iifayile ezigcinwe, njengokungathi imemori ye-USB. Mahala
Oku kubonisa igrafu yendlela ibhetri ibingakanani, ixesha elingakanani elisele kwiindlela ezahlukeneyo, usebenzisa i-Wireless, i-3G kunye nomsindo. Mahala
Umsebenzi oqhelekileyo i-ofisi, i-CAD kunye ne-GIS eyisiseko.
Yilingana ne-Microsoft Word. Kwizinto ezininzi ezisebenzayo, akukho nto ngaphandle kwezipikili. Ixhasa iifayile .docx, kunye nemingcele xa usebenzisa imithombo engavamile. $9.99
Into efana no-Excel, ifunda iifayile .xlsx nangona uvula iiseli ezidibeneyo. Inokubonakala kwinto engabonakaliyo. $9.99
I-PowerPoint version yePads. Funda amafletthi e-pptx kwaye wenze okwaneleyo ukudala iintetho, nokuba nemiphumo enomdla kakhulu engayenzi iinguqulelo ze-Ofisi. $9.99
Ukusebenza iimephu zengqondo, isekela amafomu ezenzalo kunye nokunciphisa amancinci kwiifayile ezikhuselweyo ngephasiwedi kunye nobudlelwane. $8.99
Enkulu ukugcina umkhondo wezinto zokwenza Mahala
Ndandisele ndiyihlolisise iintsuku ezimbalwa ezedlule, zinkulu ukwenza iifayili ze dwg / dxf nangona zingagcinanga ijubane newebhu. Mahala
Eyona nto ibhetele efikile ekusebenzeni i-GIS layers. Ixhasa iifayile zefomathi, iziphakamiso, i-raster, umxholo, umxholo, umbuzo kunye nenye into. $19.99
Umbukeli wedata we-GIS, ngokukwazi ukunamathela kwiinkonzo zewebhu ezakhiwe nge-ArcGIS Server. Ndiyathemba ukuphonononga oku kwiintsuku ezizayo, ukubona ukuba ixhasa naluphi na umgangatho we-OGC. Mahala
Isicelo esihle kakhulu esikuvumela ukukhuphela iimaphu zamadolophu ngokusekelwe kwi-Open Street Maps kwaye uziphathe ngokungaxhunyiwe kwi-intanethi. $0.99
Unamandla kakhulu ukuthabatha iindlela ngeGPS edibeneyo nePad. Ukulinganisa isivinini, umgama, ukuvelisa iiprofayile kunye nokudibanisa neetayitile ze-intanethi. $24.99
(Ngoku kubiza okungaphezulu)
Ukugqwesa ukukhuphela iiplani zezindlu kunye nezicwangciso ezifakiwe. Mahala
Ipad version ye-BsC, evumela ukulawulwa kolawulo lweprojekthi. $24.99
Isisiseko kwimisebenzi yesiqhelo yokubala. Kukho ezinye eziyinkimbinkimbi, ezinemifanekiso, kodwa ukutshintsha i-dinosaur ezisa iWindows, okwaneleyo. Mahala
Ukuzonwabisa kwaye basebenzise ithuba lokuzonwabisa okanye ukuphefumlelwa
I-Robust, ukuphulaphula iziteshi zerediyo. Ukuchonga abo kwindawo ohlala kuyo, ngenxa yomsebenzi wendawo apho iPad izisa khona Mahala
Ekubeni i-ipad ayixhasi i-Flash kwinguqulelo yangoku, le sicelo ikuvumela ukuba wenze izinto ezisiseko kwifama. Mahala
Ukukhuphela nokufunda iincwadi ngokuthuthuzela. Kuhle kakhulu, isekela naluphi na uhlobo lwencwadi, ngemidwebo kunye nemibala, yintoni uMhlobo ongawukwazi. Mahala
I-atlas enhle kakhulu ye-National Geographics, ukufunda kabanzi, fumana, ufumane indawo. Efanelekileyo kulabo abahamba ezininzi okanye i-maníaticos yeemaphu, iquka ulwazi oluyisiseko lwamazwe. $1.99
Ukubhala, okanye ubuncinane abalahlekelwa ngumkhwa.
Eyona nto ibhalele ukubhala kwiBlogs, ingcono kakhulu kuneBlogPress. Nguyena endiyisebenzisayo, ukuphuculwa kwayo kutshanje kuququzelele ukufakelwa kwama-hyperlinks, imifanekiso kunye neetekisi ezicebileyo. $4.99
Ukubeka iliso kwi-website, ngexesha langempela. Inguqu ye-iphone, ngoko ibukeka kwi-ipad kwimodi ye-2x. Mahala
Isicelo esikhulu sokubhala kubhulogi. Ixhasa abaphathi bezinto eziqhelekileyo: Phakathi kwabo kwi-Blogger kunye ne-WordPress, kodwa i-TypePad, i-LiveJournal, Uhlobo oluThuthiweyo, iZithuba ze-SquarespaceLive, i-Tumblr kunye ne-Joomla. Ngelishwa, isiqingatha sithathwe kwizinwele eziya kuqonda i-XMLRPC. $4.99
Isicelo esihle kakhulu sokufunda ngokubhaliweyo. Kuquka ukuguqulelwa phakathi kweNgesi kunye neSpeyin, ngokufunda kokubili.
Kukho ezinye iilwimi, libukeka lithembisa ukuba lifunde ezinye iilwimi okanye zihambe kwelinye ilizwe ngeelwimi esingaziphetheyo.
I-RSSpeaker ifanelekile, nangona kukufunda izidlo ngokuvakalayo. Kukho inguqulelo yesiNgesi neSpeyin.
Inkcazelo yeRoyal Academy, ithuluzi elibalulekileyo kulabo abahlala bebhala njalo. Kubandakanya isichazizwi seentsingiselo kunye nezichasiselo, ukutyunjwa kwezenzi kunye nesichazamazwi sangaphambili seSpanishi Mahala
Ukuhamba apho, bhala phantsi, khumbula.
Iingcali zeDrive zeDatriki
Ukubeka iliso kwi-Google Analytics kwisithuthi sewebhu. $2.99
Oku kuhle kakhulu ukubhala ibali apho uchitha iiyure zokuzonwabisa xa uhamba. Yenza kube lula ukudala izahluko kunye namacandelo ngokungafani nezinye iincwadi. $3.99
Eyona nto ingcono yokufunda iBhayibhile, iquka ezininzi iinguqulelo, iilwimi kunye neekharityhulam. Inkulu kwimisebenzi yabantwana xa behlala kwizikolo zevangeli okanye ukufumana lula izikhokelo. Mahala
Ukuze uhlale uxhumekile
Isikhangeli esibangela i-Chrome kwi-Ipad, enhle kakhulu kulabo abangasetyenziswanga kwi-Safari. Ngaphambi kokuba iGoogle ibenze abafazi, ibizwa ngokuthi iChromy. Mahala
Ukugqwesa ukulandela ukutya, nokufunda ngokubhaliweyo ngokuzwakalayo. Ikhona ngeelwimi eziliqela, kuquka iSpanish, ngegama elifanelekileyo. $2.99
Ukuthumela imiyalezo ngokukhawuleza kulungile kakhulu. Inokuthi ivela kwipaneli enye yokuphatha i-Yahoo, Facebook, Google Talk, Twitter, MSN, MySpace, Skype. Ngamafutshane, konke, ukukwazi ukufumana izilumkiso zee-imeyile ezintsha.
Iindleko zokubonwa kweentetho, ukunyanzelisa esikhundleni sokuba ubhale i-$ 0.99 ngenyanga, kodwa uyavuma kuphela isiNgesi. Mahala
Inguqu ye-ipad yakhululwa kutshanje, intle kakhulu, ibandakanya ividiyo ye-Ipad2. Mahala
Eyona nto ibhetele endibonile ukuba iyazi. Kwiphaneli unako ukulandelela umxholo womibini, nge-Google Readers okanye i-Facebook. Into ebangel 'umdla kukuba ungayibona ngokukhawuleza, ukufunda ngokugqibeleleyo, uze uye kwiphepha ngaphandle kokulahlekelwa iqhosha eliya kwibhodi. Mahala
Ukufunda amaphephancwadi edijithali ngokubhaliselwa. Uthembisa ngokuba unemiba eyahlukeneyo yamaphephancwadi asebenza ngale ndlela. Mahala
Phantse yonke into efunekayo ukuba ilandele kwaye ilandelwe kwi-Twitter. Mahala
Ukuthanda abantwana bam
Inyana yam iyayithanda, ngokucacileyo inokufana nokulawulwa kwincwadi ye-Arcade machine. Kwinqanaba elingaphandle kwiphaneli lixhaswa.
Kwaye nangona ndichasa ixesha elide, baphela ukukhuphela ii-AngryBirds $2.99
Ipiyano enobuhle ukuba abantwana basebenzise, ​​kunye neen headphone kwihambo elithandayo. Mahala
Empeleni akusiyo isicelo sezingane, sisixhobo esikhulu sokwenza. Kodwa yintombi yam ethanda into yokudlala. $7.99
Iyonke i-43, i-27 ebandakanye uluhlu lwangaphambili, kuphela i-18 yabo ehlawulwayo, eyongeza i-dollar ye-100. Nangona ukuphazamiseka kokusebenza kunye nebhobhobhodi engafanelekanga iminwe kubonakala iyona yinkimbinkimbi kwaye kuya kuphelisa ukuba ndichithe ngaphezulu kwi-hardware kune-software.
Emva kwexesha, ndafumana GIS Kit, ngombono wam uphuhliso oluhle kakhulu lweGIS / GPS lwe-iPad. Ndifumene iingcingo zebhodibhodi, i thabatha isikrini, iindlela ukudlulisa idatha kwiPC,
... ndilibali ... I-Easter evuyayo!
Post edlulileyo«Edlulileyo I2010 ilifa
Post Next Qaphela!Okulandelayo "
Enye Impendulo "IPad, izicelo zam 43 ezizithandayo"
Kuhle kakhulu ...